अ,र्ब रु,पिया छो,डेर प्र.चण्डले कुलमान रो,ज्छन् जस्तो ला,ग्दैन भन्नू हुन्छ – प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी…हेर्नुहोस।
काठमाडौं:नेपाल वि,द्युत प्रा,धिकरणको प्र,बन्ध नि,र्देशकको कु,र्सीका लागि अ,र्ब–अ!र्बको खे,ल हुन्छ । अ,र्बौ घा,टा भएको प्रा,धिकरणलाई कुलमानले अहिले वा,र्षिक ११ अर्ब ना,फामा पु,र्याए । यो भएपछि अब प्र,बन्ध नि,र्देशकको कु,र्सीको मू,ल्य पनि स्व,भाविकै रुपमा बढ्ने नै भयो । जुन कु,र्सीका लागि बि,चौ,लि,याहरुले अ,र्ब –अ,र्ब ल,गानी गर्न तयार हुन्छन् भने कुलमान घिसिङलाई त्यो कुर्सी सि,त्तैमा दि,न प्रचण्ड त,यार हो!लान् ? अ,र्ब–अ,र्ब रुपैयाँ प्रचण्डले छा,डे,र कुलमानलाई प्रा,धिकरणमा फेरि बि,रा,जमा!न ग!राउँछन् भन्ने लागेको छैन ।
तर अहिले ज!नद,बा,ब यसरी ब,ढ्यो कि कुलमानलाई न,राख्दा झ,न ठू!लो ड्या,मे,ज हुने वि,श्लेषण पनि भइरहेको होला । कुलमानलाई क,तैको रा,जदू,त वा अ,न्य नि,कायको नि,युक्ति दिएर प,न्छाउन पनि सक्छन् ।नेपालमा प,द पाउन झो,लाभ,री पै,शा हुनु,पर्छ । पै,शा न,हुनेले मन्त्रीलाई स,म्धी ब!नाउन सक्नु पर्छ । स,म्धी पनि बना,उन न,सक्नेले दलको झो,ले भएर हिँ,ड्न सक्नु पर्छ । य,स्ता काम गर्न न,सक्नेहरु जति सुकै का,बि,ल होउन् उनी,हरुले कुनै अव,सर पाउँ,दैनन् ।
ईश्वर पोख्रेलका स,म्धीलाई रा,ष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा नि,युक्ति दि,लाएको कुरा अ,नौ!ठो पनि ला,ग्दैन मलाई छ । किनभने नेपालका क,म्युनिष्ट भनेका य,स्तै नै हुन् । प,ञ्चायत,का,लमा ईश्वर पोख्रेल ने,कपा मा,लेका का,र्यकर्ता थिए । उनी ब,डो अनु,शासित र प्र,तिभाशा!ली नव,ज,वान थिए । ने,कपा मा,ले,का का,र्यकर्ताहरु अरु भन्दा अनु,शासित, देश र स,माज!प्रति ज,वा,फ,दे,ही मा,निन्थे । स!माजको वि,श्लेषण गर्न पनि उनीहरु पा,रं,ग,त देखिन्थे ।
तर जब ४६ सालको आ,न्दोलनपछि यि,नीहरुले प,द र स,त्ताको स्वा,द चा,ख्न थाले यिनीहरुको त्यो नी,ति, नि!ष्ठा र अ,नुशा!सन स,माप्त हुँदै गयो ।अहिले ग,णतन्त्रका नाममा जुन त,मा,सा भइरहेको छ, यति सा,ह्रो त राजाको शा,स,नकालमा पनि हुँदैन थियो । इति.हासदेखि स!म्झिल्याउँदा, वि,गतमा पनि आफ्ना अ,रौ,टेभरौ!टेहरुले अ,वसर न,पाउने होइ,नन् पाउँ,थे । तर प,ञ्चायतकै कुरा गर्दा त्यो बेला रा,जाहरुले पनि आफ्ना नि,कटलाई नै मह,त्वपूर्ण ठाउँमा प,ठाउँथे । तर त्यो बेला दर,बारले ‘डि,जर्भि!ङ’ लाई नै पठा,उने ग,थ्र्यो ।
द!रबारसँग नि,कट भएका य!दुनाथ खनाल, प्रकाश एराज, भेष,बहादुर थापा, हर्क गु,रुङलगायत धेरै वि,द्वानहरुले अवसर पाए । यिनीहरु रा,ज,भ,क्त नै थिए, तर उनीहरु राजैसँग पनि ब,हस गर्न तयार हुन्थे । एक पटक त के सम्म भयो भने परराष्ट्रको सचिव य,दुना,थ खनाल थिए, राजा वीरे,न्द्रले प्रकाश एरा,जलाई अ,फिसरमा नि,युक्ति दिनू भन्ने हु,कुम दिए ।इ!ञ्जिनियरिङ गरेका प्रकाशलले परीक्षा पास नै गरेका थिए । पर!राष्ट्रमा उनी जान चाहन्थे । तर ‘पर,राष्ट्र जस्तो वि!शेष सेवामा ल्याउन मि,ल्दैन सरकार’ भनेर य,दुनाथले अस्वी,का!र गरिदिए ।
अ,र्थात पहिले पनि भ,क्तहरुले अ,वसर पा,उँथे । तर उनीहरु यो,ग्य हुन आ,वश्यक हुन्थ्यो । अहिले त म्या,नपावरको द,लाललाई रा,ज,दू,त, वि,देशी कम्पनीको द,लाललाई ल,गानी बो,र्डको सि,इयो, ने,ताकी प,त्नीलाई राष्ट्रपति, छो,रीलाई मेयर, बु,हारीलाई मन्त्री बनाइएको आफ्नै आँ,खाले दे,खियो त ।क,म्युनिष्ट हौं भनेर, जब,जको कुरा गरेर ईश्वर पोख्रेलहरुले अहिले जे गरिरहेका छन्, यो क,म्युनिष्टको सं,स्कार भि,त्र पर्दैन । यति नि,र्लज्ज ह,र्कत त पहिले पहिले नि,रंकु,श भनिएका व्य,वस्थामा पनि हुँदैन थियो ।(प्रा.डा. केसीसँग गरि,एको कु,राकानीमा आ!धारित)